Itoobiya: Ciidamada Tigrayga oo gacanta ku dhigay magaalada Dessie ee maamulka Axmaarada - Horseed Media
Itoobiya: Ciidamada Tigrayga oo gacanta ku dhigay magaalada Dessie ee maamulka Axmaarada
Afhayeenka xoogaga fallaagada ah ayaa sheegay in ciidamada Tigreyga ay maanta oo Sabti ah qabsadeen magaalada Dessie oo ka tirsan ismaamulka Axmaaradda.
Dagaal dheer kadib ayey Ciidamada Tigrayga ay ku guuleysteen inay qabsadaan magaalada istiraatiijiga ah ee Dessie ee gobolka Axmaarada oo xuduud la leh Tigrayga, sida uu sheegeen afhayeen u hadlay fallaagada iyo dadka deegaanka.
Dadka deegaanka ayaa wakaalada wararka ee AFP u sheegay in ciidamada dowlada ay dib u gurteen sabtidii deegaankaasi, kadib dagaalo xoogan iyadoo laga jaray deegaankaasi korontadii.
Getachew Reda, oo ah afhayeenka kooxda Tigray People’s Liberation Front (TPLF) ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay isagoo ku sugan meel aan la shaacin, in dagaalyahannada Tigreegu ay ciidammada dawladda ka soo riixeen magaalada Dessie, ayna hada ku wajahan yihiin magaalada Kombolcha.
Qabsashada Dessie waxay faa’iido istiraatiji ah u noqon doontaa dagaalyahanada Tigrayga oo doonaya inay qabsadaan dhulka Axmaarada.
Magaaladan ayaa 385km u jirta caasimada Addis Ababa, waana guushii ugu weynayd oo ay xoogaga Tigrayga ka gaaraan dagaalka ka socda ismaamulka Axmaarada tan iyo markii ay gobolkaasi soo galeen bishii July.